Toro lalana ho an'ny tsindrona Ganirelix Acetate (Ganirelix) tsikelikely
Ny zava-drehetra momba ny Acetate Ganirelix (Ganirelix)
2. Ahoana ny fomba fiasan'ny Ganirelix Acetate?
3. Top 3 vokatry ny Ganirelix Acetate
4. Ahoana no tokony hampiasantsika ny Ganirelix Acetate (Ganirelix)?
5. Fampitandremana Ganirelix Acetate (Ganirelix)
6. Ganirelix loharano an-tserasera
1. Ganirelix Acetate (Ganirelix) fampidirana
Ganirelix Acetate dia proteinina nataon'olombelona izay manampy amin'ny fihenan'ny hormona sasany ao amin'ny vatana. Izy io dia mifanaraka amin'ny sokajy fanafody fantatra amin'ny anarana hoe GnRH antagonists na mpanohitra tsotra fotsiny. Ireo zava-mahadomelina ireo dia ampiasaina mba hisorohana ny fiterahana mialoha ny fotoana. ankehitriny Ganirelix Acetate dia malaza noho ny fampiasany mora foana sy ny taham-pahakiviana avo lenta.
2. Ahoana no iarahan'i Ganirelix?
Rehefa misy ny teknolojia fanabeazana (ART) ary manampy amin'ny fihoaram-pepika mifehy ny aretin-koditra izy, dia mety hiafara amin'ny haavon'ny estrogen izy ho valin'ny Hormone Hetsiky ny Follicle. Avy eo dia mety mitarika ny famokarana haingana ny hormone luteinizing izay ny ovulation vao haingana.
Vokatr'izany dia tsy ampy ny atody alefa atody mba hanomezana fanafody mahomby. Izany no nahatonga ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana tonga niaraka tamin'ireo mpanohitra GnRH, toy ny ganirelix sy ny gonadotrophin-hormone GnRH agonistes, ohatra, leuprolide mba hisorohana ny fivoahana ny hormonina luteinizing izay mampitombo ny fahombiazan'ny fizotry ny fahavokarana.
Mandritra ny protocol hyperstimulation voafehy, tokony hampidirina Ganirelix Acetate ianao amin'ny andro fahenina amin'ny fitsaboana FSH. Ganirelix dia miasa amin'ny fanakanana ny famokarana hormonina luteinizing amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo mpikatroka GnRH amin'ny hôpitaly. Izy io koa dia mitarika fifindrana haingana sy mihodina amin'ny tsiambaratelo gonadotrophin rehefa ampiasaina ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Ny fihenan'ny hormonina luteinizing endogenous entin'i Ganirelix dia mihoatra ny an'ny hormonina manaitaitra follicle endogenous. Miankina amin'ny vehivavy tsirairay ny fitantanana ny Ganirelix Acetate fa amin'ny salan'isa; tokony ampiasaina mandritra ny efatra ka hatramin'ny dimy andro.
Ganirelix Acetate dia miasa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny famokarana ny fihenan'ny homamiadana ary tsy mahagaga raha voatendry ho an'ireo izay mitady hitoe-jaza. Ilaina io hormonina io amin'ny ovulation ary amin'ny fanombohana ny dingana luteal amin'ny tsingerina. Avy eo ilay manam-pahaizana dia afaka mitaona ny hormonina Luteinizing artifisialy amin'ny alàlan'ny fanomezana tsindrona ara-potoana ny gonadotrofinina chorionika olombelona (HCG). Vita izany raha vantany vao habeny mifanaraka amin'ny habe izay tokony ho hita amin'ny valin'ny fitarafana (17mm na lehibe kokoa) ny folil.
Taorian'ny fitantanana ny HSG, ny fampiasana ny FSH sy ny Ganirelix dia nijanona. Raha vao misy ny fitantanana HCC, dia tonga ny fanasoketana farany ny oocytes, ary ny ovulation dia mitaky fomba fandefasana fotoana fohy. Ny oocytes koa dia azo nalaina tamin'ny fomba fiasan'ny ART, ohatra, ny fanafody in vitro (IVF)
Miresaka momba ny Ganirelix Acetate tombontsoa, mameno azy ireo amina entana be dia be izy io. Nahazo ny zava-drehetra ilaina izy mba hananana andraikitra lehibe amin'ny fiatrehana ny olana momba ny fahavokarana. Ireto manaraka ireto dia sasany amin'ny vokatra Ganirelix Acetate vokatry ny fampiasana azy;
(1) Ganirelix Acetate ho proteinina nataon'olombelona
Ganirelix Acetate dia proteinina namboarin'olombelona izay decapeptide synthetic. Ny proteinina nataon'olombelona dia voaporofo fa zavatra lehibe manaraka amin'ny tontolon'ny fitsaboana satria ny hery fiarovan'ny vatana dia tsy mikendry azy ireo na miharatsy ny anzima, tsy toy ny proteinina voajanahary.
Ny proteinina nataon'olombelona dia manahaka ny firafitra sy ny fomba fiasan'ny proteinina voajanahary. Ganirelix Acetate dia miasa amin'ny fampihenana ny isan'ny hormona sasany, izany hoe, estrogen ao amin'ny vatana.
(2) Ganirelix Acetate manampy anao hifehy hormonina
Ny tsy fahampian-tsakafo dia pilina mangidy mba hitelina ny rehetra. Raha vao fantatrao fa manana olana ianao rehefa mitondra zaza, dia mety hisy vokany eo aminao izany. Mbola ratsy kokoa, mety hihevitra ianao fa tsy misy zavatra azonao atao momba izany. Sarotra ny manjo ny toe-javatra, ka misy fandrosoana ara-pitsaboana mety hanampy anao.
Ny iray amin'ireo antony mahazatra ny tsy ahitan'ny vehivavy ny fisainana dia ny hoe manana aretina amin'ny fanotaniana izy ireo. Soa ihany, momba ny 70% amin'ireo tranga ireo dia azo tsaboina amin'ny fampiasana fanafody. Ny olana hormona dia iray amin'ireo olana lehibe izay miteraka ovulation. Izany dia satria ny dingan'ny fambolena dia miankina amin'ny fandanjalanjana hormonina sarotra ary ny fifandraisana eo amin'ny fahombiazana dia tsy tokony hisy fanelingelenana izay mety hampiato ny dingana.
Ny iray amin'ireo zavatra manelingelina ny ovulation dia rehefa tsy afaka mamokatra voankazo mahazatra izay ahafahan'ny atody matotra. Tsy mety hitranga ny fisiahana rehefa tsy maharitra ny atody, ary tsy misy ny fisian'ny fahafonganana mihelina. Fampidirana an-tsakany sy an-davany 2019 ho an'ny Gonadorelin Acetate
Ny iray amin'ireo vokatra Ganirelix Acetate dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny hormona mandritra ny fitsaboana ny tsy fiterahana amin'ny vehivavy. Mandritra ny fanaovana kopia fanampiana, azo ampiasaina hanakanana ny asan'ny GnRH amin'ny pituitary izany ka hanakanana ny famokarana sy ny hetsika LH sy FSH. Vokatr'izany dia misoroka ny famokarana atodinaina aloha loatra izay mety hiteraka fijinjana atody mbola tsy matotra izay mety tsy hanampy, indrindra rehefa misy fizotra toy ny fampiraisana in vitro.
Noho izany raha mandalo olana ara-pahasalamana ianao noho ny olana amin'ny ovulatory, dia izao no fotoana handinihanao ny fampiasana Ganirelix Acetate. Amin'ity zava-mahadomelina ity, afaka manomboka ny dia ataonao amin'ny ray aman-dreninao miavonavona.
(3) Ny vokany hafa aorian'ny fampifangaroan'ny fanafody hafa
Miaraka amin'ny fanafody hafa, ny Ganirelix Acetate dia ampiasaina hitsaboana ny tsy fiterahana amin'ny vehivavy. Raha vantany vao atsindranao ny Ganirelix Acetate ianao dia atao amin'ny fihary pituitary izany ka mandrisika ny famokarana hormonina izay mandrisika ny fitomboana sy ny fivelaran'ny atody.
Taloha, Lupron dia nampiasaina hisolo an'i Ganirelix Acetate hanakanana ny pituitary tsy hiteraka ovulation aloha loatra. Rehefa ampiasaina dia hampirisika ny pituitary mandritra ny andro vitsivitsy izy ary avy eo mamono azy. Noho izany dia tsy maintsy nampiasa azy io ny herinandro vitsivitsy talohan'ny nanombohany nihinana fanafody fiterahana ho an'ny fanentanana ny ovaoro.
Vokatr'izany dia maro ireo vehivavy nanamboatra ranomandry tao amin'ny ovoara, toe-javatra iray izay nanemotra ny fampiasana fanafody famonoana.
Ny iray amin'ireo vokatra Ganirelix dia ny tsy fananany dingana mandrisika; fa kosa, ny famoretana ny pituitary dia mitranga eo noho eo. Tsy ilaina, noho izany, ny manomboka ny fanafody alohan'ny manomboka mihinana fanafody fiterahana. Efatra ka hatramin'ny enina andro aorian'ny hanombohanao mihinana fanafody mahavokatra no fotoana mety indrindra hampidirana ny Ganirelix Acetate. Ohatra iray amin'ny fanafody fiterahana izay ampiasaina miaraka amin'ny Ganirelix Acetate dia Follistim sy Gonal F.
Miresaha amin'ny dokotera momba ny fampiasana hafa momba ny fampiasana Ganirelix Acetate injection.
4. Ahoana no tokony hampiasantsika ny fanafody Ganirelix Acetate (Ganirelix)?
(1) Ganirelix Acetate (Ganirelix)?
Raha vantany vao eo amin'ny roa na telo amin'ny fitsaboana hormonina mandrisika follicle (FSH) ianao dia afaka manomboka mampiasa ny tsindrona Ganirelix Acetate. 250mcg an'ny tsindrona Ganirelix Acetate dia ampitaina isan'andro amin'ny andro iray isan'andro. Ny fampidirana Ganirelix Acetate dia atao mandritra ny tapaky ny tapany farany amin'ny dingana follicular.
Mety tsy ilaina ny mitantana ny FSH amin'izao fotoana izao noho ny fisorohana aretin'ny endezine FSH.
Tokony hanohy ny fitsaboana Ganirelix Acetate ianao mandra-pahatongan'ny andro hitantanananao ny olombelona Chorionic Gonadotrophin (hCG). Ny ultrasound dia azo atao mba hanombanana fa misy follicle marobe ampy ny habeny ary avy eo dia omena ny hCG hitaomana ny fahamatoran'ny follicle.
Na izany aza, ny hCG dia tsy tokony hajaina na oviana na oviana raha toa ka mihalafo ny oviana. Raha omena amin'ny andro farany amin'ny fitsaboana FSH izy io dia mety hitarika amin'ny fivoaran'ny OHSS (sendraman'ny hyperstimulation ovara)
(2) Mampiditra ny Acetate Ganirelix (Ganirelix) tsikelikely
Amin'ny ankapobeny, ny vovony Acetate Ganirelix (129311-55-3) ny tsindrona dia omena amin'ny syringe tsy misy steril izay matetika fenoina ary omena subcutaneva fotsiny. Rehefa miresaka momba ny tsindrona subcutaneaux isika dia midika izany fa ny tsindrona Ganirelix Acetate dia atsindrona ao ambanin'ny hoditra.
Mandritra ny fampidiran-doko kely, ny fanjaitra fohy dia ampiasaina mba hampidirana ny fanafody ho ao amin'ny teboka misy eo anelanelan'ny hozatra sy ny hoditra. Ho an'ny fampidiran-doha, ny fitsaboana dia miondrika ao amin'ny rafitra amin'ny fihenanam-piantohana ary ampiasaina matetika raha toa ka tsy mahomby ny fomba fitantanana hafa.
Alohan'ny hidiranao ao amin'ny Acetate Ganirelix, dia jereo ny fizarana na ny refilo. Raha mahatsikaritra izany ianao dia aza mampiasa izany.
Satria omena Ganirelix Acetate dia boky kely, ny tsindrona subcutanezy no tsara indrindra satria io no fomba azo antoka sy ilaina indrindra hampidirana ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana. Ity ny fomba tokony hampiasanao tsindrona Ganirelix Acetate tsikelikely;
Mitadiava tranokalam-pandaharam-pahalalana ho an'ny tsindrin-tsiranoka. Tena ilaina ny tranonkala fitsaboana rehefa mikarakara fanindroany. Ganirelix Ny fampidirana ao anaty ganirelika dia tokony hampidirina ao anaty tavy mahazatra hita eo ambanin'ny hoditra. Ny sasany amin'ireo faritra ao amin'ny vatantsika dia manana tavy kokoa azo ampitahaina amin'ny hafa. Ny ampahany amin'ny vatana dia ny tsara indrindra ho an'ny tsindrona toy izany satria rehefa ampiasaina ny fanjaitra, dia tsy azo inoana fa handratra taolana, hozatra na ra. Mety ho eo amin'ny kibo, manodidina ny bokotra na eo amin'ny roa hektara lavitra ny elatra. Mety ho eo amin'ny ampahany am-paladia ihany koa izany.
Arovy ny tananao. Sasao amin'ny rano mafana sy savony ny tananao mba hisorohana ny tsy hijalian'ny aretina. Ataovy azo antoka fa manasitrana ny faritra eo anelanelan'ny rantsantanana, eo ambanin'ny rantsan-tanana sy eo an-damosinao. Afaka mamafy ny tananao farafahakeliny roapolo segondra ianao, ary sasao eo am-pamohizana tanteraka.
Angony ny fitaovana izay ilainao. Azon'izy ireo atao ny mampiditra ny siramamy misy ny fanafody, tenda ary pensilihazo izay mila anao rehefa te-handroaka ny angatra sy ny fanjaitra ampiasaina ianao.
Diovy sy zahao ny faritra atsindrona. Diniho ny toerana misy tsindrona mba hahazoana antoka fa tsy misy fivontosana, mangana, henjana, may na mahasosotra ny faritra. Diovy amin'ny toerana misy otrikaretina ny tranokala mba hamonoana bakteria manodidina ilay tranokala. Diovina manodidina ny roa santimetatra eo ho eo io faritra io mba hahazoana antoka fa tsy hidiran'ny mikraoba ao amin'ilay toerana misy tsindrona. Andraso ny famonoana otrikaretina mandritra ny iray minitra farafahakeliny alohan'ny hifindrany amin'ny dingana manaraka.
Tazony ambony ny seranana ary esory ny fanjaitra.
Pikolokolo hoditra lehibe eo amin'ny ankihibenao sy ny rantsantanana amin'ny endriny. Manampy ny manala ny tavy eo amin'ny tazomoka izy io ary manatsara kokoa ny fikarakarana anao. Ataovy antoka fa samy mandray karazana fitaovana fampidiran-dra ianao isaky ny mitsidika anao. Izany dia manampy amin'ny fisorohana ny manimba ny faritra.
Miaraka amin'ny hoditra mipetaka, atsangano ny fanjaitra eo amin'ny fototry ny hoditra amin'ny ankapobeny 45-90% eo amin'ny hoditra.
Mariho fa rehefa manitsy tsara ny serfinganao ianao, dia ho sarotra ny hiverina amin'ny tsorakazo. Raha hitanao fa misy ra nalaina tao anatin'ilay fihenam-bidy, dia midika izany fa ny taovam-pandrika dia nanindrona taolana na vinaingitra. Ny tokony hataonao dia ny manala kely ny fanjaitra ary manangana azy indray nefa tsy manala ny fanjaitra amin'ny hoditra. Azonao atao koa ny mieritreritra ny manala tanteraka ny fanjaitra sy mampiasa siramamy vaovao, mangetaheta, ary mialoha. Mitondrà vovoka iray misy zaza fanjohiana ary mametraka izany eo amin'ny tranokala fandefasana izany ary mampihatra sakana. Noho izany, ny tranonkala fitsaboana dia tokony hampijanona ny fandatsahan-drà ao anatin'ny iray minitra na roa.
Avereno atao ny dingana ary ataovy azo antoka fa napetraka tsara ilay fanjaitra. Azonao azera kely tsikelikely ilay tongotra. Izany dia ho azo antoka fa ny vahaolana dia nampidirina tamim-pahombiazana ary amin'ny fotoana iray ihany, tsy mamela ny hoditrao no simba. Ny habetsaky ny zava-mahadomelina ao anatin'ilay angatra dia tokony hiditra.
Esory haingana ny tiroida ary apetraho amin'ny tavoahangy iray misy fantsom-pandrefesana ao amin'ilay tranokala. Aza adino ny mampihatra tsindry ahafahana manohitra ny fandatsahan-dra. Mety hitanao fa mipoitra kely ianao rehefa vita, fa tsy tokony hanahy anao. Mazava ho azy fa handeha lavitra izy alohan'ny hitantaranao.
Tsy maintsy ampiasaina indray mandeha fotsiny ilay seranana tsy azo ampiasaina, ary tsy azo zaraina mihitsy. Raha vantany vao vita ianao dia zahao tsara mba hisorohana ny fahasimbana na ny loza.
Toy ny amin'ny fampidirana fanafody, dia azo atao ny mahazo fanafody. Raha tsikaritrareo ny mena, ny fery, ny fanaintainana mafy na ny hafanana, dia jereo ny dokotera avy hatrany.
Tsara fa alohan'ny hanapahanao hevitra hampiasa ity zava-mahadomelina ity dia ampahafantaro ny fampitandremana Ganirelix. Tena manakiana ity fampahalalana ity satria raha vakianao io dia azonao atao ny milaza raha azo antoka ho anao ny mitsindroka Ganirelix Acetate na tsia.
Raha toa ka mila an'io zava-mahadomelina io ianao, dia misy ny fepetra mety hijalianao ka mety hampidi-doza anao io fanafody io. Ny sasany mety tsy voatery ho aretina fa ny fomba fiainana. Ireto misy fampitandremana Ganirelix mety hisy fiatraikany amin'ny fahombiazany.
Ny Ganirelix dia tsy tokony hampiasaina amin'ny marary izay fantatra fa hijaly noho ny fiheverana ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina na ireo fitaovana hafa izay nahitana ity fitaovana ity. Anisan'izany ny marary mijaly vokatry ny fihanaky ny tendrony latex, satria ny ganirelix dia misy gnou / lateks voajanahary.
Ireo marary izay manana tantara amin'ny gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) dia tsy tokony hampiditra ny Acetate Ganirelix. Izany dia noho ny fanaovana izany dia mitarika ho amin'ny fihetseham-po mahery vaika amin'ny fanandramana na ny anaphylaxis.
Nisy ny tranga momba ny fanehoan-kevitra mahery vaika, ohatra, fanehoan-kevitra anaphylactoida notaterina taorian'ny doka voalohany. Tsy mahagaga raha ny vehivavy mijaly noho ny fepetra faran'izay mampidi-doza dia voatery miala amin'ny zava-mahadomelina. Raha azonao atao amin'ny Ganirelix Acetate na fanafody hafa tahaka ny nafarelin (Synarel), goserelin (Zoladex), leuprolide (Lupron, Eligard), dia tokony hiala amin'izany ianao.
Ny tsy fahombiazan'ny oviana
Raha manana olana amin'ny pitsopitson'ny hypothalamika ianao na ny valin'ny oviana, dia tsy ilaina ny mametraka Ganirelix Acetate vovoka satria mety tsy misy fanampiana izany. Ny antony ao ambadik'izany dia ny tsy fahampian'ny otopim-pihetseham-panafody tsy mety amin'ny tsy fahombiazan'ny oviana.
Cystic ovarian, syndrome polyarystika
Alohan'ny hanombohana ny fitsaboana an'i Ganirelix, tokony ho fantatrao ny fomba fanarahamaso izay ilainao hatao. Raha sendra mahita soritr'aretina ny fanitarana ny oviana ianao, dia tokony ho hitan'ny dokotera avy hatrany. Mety misy ny fanaintainana sy ny aretin-kibo, ny fitevena, ny hafanana, ny ascites (fanavahana na ny fluid ao amin'ny kibo) na ny tsy fahampian-tsakafo. Torolàlana momba ny tombotsoan'ny Ipamorelin sy ny fampiasana Ipamorelin
Atsaharo ny fampiasana mpamatsy fiterahana rehetra, anisan'izany ny an'i Ganirelix, raha voan'ny hyperstimulation syndrome (OHSS) na fanitarana atodinaina ianao. Mety tsy hahatsikaritra ny fanitarana ny ovarianina be indrindra ianao mandra-pijanonanao hampiasa Ganirelix Acetate mandritra ny andro vitsivitsy. Aza manomboka mampiasa azy intsony raha tsy miverina ara-dalàna ny haben'ny atodinaina.
Manoloana izany dia alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana fiterahana, dia tokony hohavaozina avokoa ireo fanadinana feno pelvic izay misy hôpitaly pelvika amin'ny marary vehivavy rehetra mandritra sy alohan'ny fanombohan'ny vanim-potoanan'ny zava-mahadomelina. Ireo marary manana otrikaretina oviana (PCOS) dia mihasahiran-tsaina amin'ny gonadotrophins ary mety maneho fanehoan-kevitra mihetsiketsika amin'ny protocols amin'ny hodi-hyperstimulation.
Ny antony hafa mety hahatonga anao hijaly amin'ny sendikan'ny hyperstimulation oviana dia seron-serum estradiol (mihoatra ny 400pg / ml) mialohan'ny hCG, manana vatana mangatsiaka ary mbola kely kokoa.
Ny fikarohana natao momba ny fiasan'ny Ganirelix Acetate amin'ny fitsaboana ny tsy fiterahana amin'ny vehivavy, dia tsy nahitana vehivavy geriatrika ampy. Noho izany, Ganirelix Acetate dia tsy asaina ampiasaina amin'ny vehivavy antitra izay mitady hamaha ny olana momba ny fiterahana.
Ny aretina hepatika, ny aretin'ny voa
Ny fikarohana dia mbola tsy natao momba ny vokatr'i Ganirelix amin'ireo marary manana fahasembanana amin'ny voa na aretina hépatika. Izay mijaly amin'ny toe-javatra toy izany dia ampirisihina hampiasa an'io fitsaboana io am-pitandremana be.
Ganirelix dia mbola tsy voaporofo raha azo antoka sy mandaitra ampiasaina amin'ny ankizy. Misy fampitandremana Ganirelix noho izany ny fampiasana ny zaza latsaky ny valo ambin'ny folo taona.
Ny vovobony Ganirelix Acetate dia miteraka faneriterena GnRH, ary noho izany dia tsy tokony hampiasaina amin'ny vehivavy mampinono. Raha misy reny mampinono manapa-kevitra ny hampiasa Ganirelix Acetate, dia tokony hieritreritra hampiasa endrika hafa amin'ny famahanana ny zanany izy ireo. Tsy mbola fantatra raha azo esorina anaty rononon-dreny i Ganirelix.
Fanosihosena etanôla, fifohana sigara
Ny fisotroana zava-pisotro misy alika toy ny labiera na ny ethanôl sy ny fifohana sigara dia mety hampihena ny fahavokarana na ny fahombiazan'ny fitsaboana fahavokarana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Rehefa mampiasa ny Ganirelix na ny fitsaboana hafa momba ny fahavokarana hafa dia voatery izy ireo hisoroka ny fisotroana tafahoatra sy ny paraky.
Tsy azo atao ny mandray an'i Ganirelix taorian'ny nahaterahan'ilay tetikasa. Alohan'ny hanombohana mampiasa Ganirelix Acetate (129311-55-3), tokony atao ny fitsapana ny bevohoka mba hamoaka ny fepetra azo atao.
Tao amin'ny fanadihadiana natao tamin'ny 283, vao teraka ny renim-pianakaviana izay nomena an'i Ganirelix, dia nasehony fa ny isan'ny tranga lehibe indrindra sy tsy ampy taona dia 3 sy 18 neonates. Ny fanavakavahana lehibe dia ahitana ny Syndrome Beckwith-Wiedemann, omphalocele sy hydrocephalus / meningocele. Ny fototarazo dia misy ny hydronephrose, ny testes tsy mitongilana, ny hydrocele, ny hernia inguinalis, ny hernia tsy afa-belona, ​​ny hetsi-tànana, ny tortikollis / avo palate, ny subluxation hip, ny zandriny zandriny, ny talipes, torticollis / asymmetric skull, hemangioma, ary sinale masina. Azon'izy ireo atao koa ny manisy marika hoditra sy nevus.
Maromaro amin'ireo vokatra tsy dia fahita firy miaraka amin'ny fampiasana Ganirelix Acetate ny fitomboan'ny lanjany, ny fivalanana, ny fivontosana ary ny fanaintainan'ny kibo na ny vavony.
Ny mahalana dia ahitana;
Fahalemena tsy mahazatra na reraka,
fihinanan-koditra, hoditra, fitsikerana
Ny fihomehezana na ny firehetan'ny hodi-maso, ny tarehy, ny maso, ny molotra, ary ny lela
Sarotra ny mitelina
6. Loharano ao Ganirelix anaty aterineto
Betsaka ny loharanom-baovao Ganirelix an-tserasera, saingy ny fividianana an-tserasera dia maharesy azy rehetra. Manomboka amin'ny fitadiavana vidiny tsara kokoa ka hatramin'ny fisorohana ny vahoaka, misy antony maro mahatonga ny fividianana Ganirelix Acetate an-tserasera ho tsara kokoa noho ny fitsidihana fivarotana iray. Androany, be dia be ny olona mividy ny Ganirelix Acetate azy an-tserasera, ary holazaiko anao ny antony.
Amin'ny fiantsenana an-tserasera dia tsy mila mividy Ganirelix Acetate ianao ary hitondra azy manodidina. Ny fananana izany ao anaty kitaponao mandritra ny tontolo andro, rehefa mila manao zavatra hafa manokana ianao dia mety hanaintaina. Manamarina ny paosinao foana ianao sao matahotra sao ho raraka. Indraindray mety ho menatra ianao rehefa mahita ny sakaizanao iray izay tsy tianao ho fantatra fa mihinana fanafody ianao ao anaty kitaponao. Mba hisorohana ny ahiahy rehetra dia mividiana an-tserasera Ganirelix Acetate ary alefa any am-baravaranao.
Hahafinaritra anao ny fiainanao manokana rehefa tonga ianao buy Ganirelix Acetate -tserasera. Tsy misy olona hahafantatra fa miady amin'ny olana momba ny tsy fiterahana ianao. Tsy mila miditra amin'ny magazay ianao ary mahazo izany endrika hafahafa izany raha vao mangataka Ganirelix Acetate ianao. Amin'ny Internet, tsy misy olona hijoro na hitsara anao amin'ny fividianana izay nataonao. Soa ihany fa azonao atao ny mividy Ganirelix Acetate amin'ny Internet ary alefa an-tsokosoko izany.
Zava-misy tsy miankina ho anao ny mikaroka fomba iray hiatrehana olana ara-pahasalamana. Ka amin'ny manaraka raha te hividy Ganirelix Acetate ianao dia afaka mividy izany ao amin'ny aterineto, ary ny snoopy dia tsy hahalala mihitsy ny zavatra ataonao.
Mety handany vola kely aminao izany raha oharina amin'ny fidirana amin'ny fivarotana. Ny vidin'i Ganirelix dia mety ho ambany kokoa amin'ny Internet raha ampitahaina amin'ny magazay mandeha an-trano satria vitsy kokoa ny vidin'ny overhead. Ny zavatra iray hafa izay tokony hahatonga anao hividy an'ity zava-mahadomelina ity amin'ny Internet dia ny tsy mila filaharana ao amin'ny magazay be olona miandry ny hanompoana azy. Ny fihainoana ireo hira momba ny taona 1980 teo am-piandrasana olona am-polony alohan'ny hanaovanao ireo dia mety hanorisory.
Mba hisorohana ny zava-drehetra tsy hitranga, alaivo ny solosaina findainao na findainao, mipetraha eo amin'ny sofina mampiadana miaraka amin'ny dihin'ny dite sy biscuit ary manamboara lamandy mandritra ny iray minitra.
Raha tsikaritranao fa mila famenon-javatra Ganirelix Acetate ianao ary tsy manam-potoana handehanana isaky ny magazay hitady azy, dia ny fividianana an-tserasera no fanapahan-kevitra tsara indrindra azonao raisina. Tsy mila mahita doka ianao satria ho feno ao anaty fotoana fohy ny talantalana. Alefaso izany raha vantany vao hitanao fa mila refill ary tsy ho lany eo mihitsy ianao.
Na izany aza, ny fananana fizotran'ny fividianana an-tserasera dia mila mitandrina ianao satria tsena toy ny hafa rehetra izany. Ao amin'ny Internet, misy mpivarotra ara-dalàna na mpivarotra fatratra izay hivarotra fanafody sandoka amin'ny vidiny Ganirelix mihena be. Ny hafa dia mety tsy misy fangaro mavitrika tadiavinao ka mety tsy manome ny tombony Ganirelix azonao.
Ny zava-mahadomelina hafa dia mety ahitana fitaovana mampidi-doza izay tsy voatanisa, ary mety hisy fifandraisana tsy ampoizina amin'ny fanafody hafa anananao. Mety mbola hampijaly anao amin'ny loza mampidi-doza na olana ara-pahasalamana izany. Ny fanafody hafa dia mety tsy ho voatahiry araka ny tokony ho izy, ohatra, miaraka amin'ny fanaraha-maso ilaina ny hafanana ary mety tsy hahomby ilay fitsaboana. Vokatr'izany, mety hampiasa ny volanao amin'ny zava-mahadomelina ianao ary tsy hahamarika ny tombontsoa Ganirelix.
Phcoker.com no tranokala tsara indrindra ahafahanao mividy Ganirelix Acetate (129311-55-3). Eto ianao dia mahita ny vidin'ny Ganirelix tsara indrindra ary mankafy ny fanamorana serivisy tena tsara izay hanome anao fiadanan-tsaina mandritra ny fizotrany.
Manana ekipa manam-pahaizana manokana momba ny mpanjifa isika izay vonona ny hanompo anareo haingana sy hahafinaritra araka izay tratra. Ary koa, ny anay Ganirelix dia tena mora vidy, ary azonao antoka fa sariaka kokoa noho ny mandoa matetika ianao. Izahay dia mikasa hatrany ny hampidina ny Ganirelix ho ambany satria miahy ny paosinao izahay. Ary koa, tsy misy fiampangana miafina hafa ankoatry ny vidin'ny Ganirelix ao amin'ny tranonkala.
Ny kalitaonay no tsara indrindra ho azonao eny an-tsena. Azonao atao ny miantehitra aminay amin'ny fahasalamanao satria tranokala azo itokisana izahay izay hanome anao ny tena fifanarahana. Manome toky anao izahay fa tsy hahazo afa-tsy Ganirelix Acetate madio sy madio ianao. Vantany vao mampiasa Ganirelix Acetate baiko avy aminay ianao dia hitantara ny mahasamihafa azy amin'ny iray amin'ireo magazay hafa satria ny anay dia manome mihoatra ny antenainao.
Fantatsika fa ny fahasalamana dia ivon-dohan'ny fiainana milamina. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia izahay no loharano Ganirelix izay hanolotra anao amin'ny fandefasana haingana, ny vidiny ambany, ny Ganirelix Acetate tena izy (129311-55-3) ary ny fanampiana hafa mety ilainao aminay.
Order avy amin'ny loharano Ganirelix tsara indrindra ary manomboka mankafy ny tombony Ganirelix anio.
Biotechnology sy Biopharmaceuticals: Manova ny proteinina sy ny jadona amin'ny zava-mahadomelina, pejy 327
Ny Fitsipiky ny Foi Chemistry, Thomas L. Lemke, David A. Williams, pejy 231
Ny GenRx ao Mosby: Fitsaboana iray manontolo momba ny zava-mahadomelina mahazatra sy marika, Taratasy momba ny dokotera Generic prescription, Mosby 2001, pejy 1133-1134